CopyPaste Pro Mac - # 1 Khuphela Umphathi wesiqwengana sezinto ezininzi | I-Plum emangalisayo%
CopyPaste Pro Mac - # 1 Khuphela Umphathi weeklip ze kliphu
Asanda: 12 / 12 / 21
NgeCopyPaste qala ukusebenzisa eyona nto inamandla kwikhompyuter yakho. Olo phawu Khuphela kwaye Cola olusetyenziswa amaxesha ngamaxesha yonke imihla ngomsebenzisi ngamnye wekhompyuter kwaye kunye nebhodi eqhotyoshwayo enye. I-CopyPaste yayiyeyokuqala kwaye yeyona nto isebenzisekayo kwibhodi eqhotyoshwayo yokubonisa, yokugcina kunye nokuhlela ii-clipboard ezininzi. Bona kwaye uhlele nayiphi na iklip kwimbali yakho yeekopi okanye kwindawo yokugcina iklip engapheliyo. Gcina ii-clipboards ezininzi ngokuqala kwakhona. Iluncedo kakhulu. Isigcini xesha esikhulu, kunye nesigcina ubomi kubo bonke abasebenzisi beMac.
“Andinakucinga ikhompyutha ngaphandle kwePhepha lokuKhuphela” - Umnumzana James Galway, Flautist owaziwa ngokuba nguMhlaba
CopyPaste Pro Mac - # 1 Khuphela Cwangcisa Multi Clip Manager ubungakanani
“I-CopyPaste ibusebenze lula ubomi bam kwaye andinakucinga ikhomputha ngaphandle kwayo. Ukuba ubhala okuninzi kwikhibhodi kwaye usika kwaye uncamathisela esi sisixhobo esifanelekileyo somsebenzi. Gcina zonke iintlobo zezinto ezinjengezihloko zeeleta kunye needilesi zokufaka kumnxeba wesitshixo. Ilula kakhulu ukuyisebenzisa. ”
Mnumzana James Galway, Umdumi oDumileyo weHlabathi
Le (CopyPaste) yeapp is 100% AMAZING kwaye ndisebenzisa amanqaku ayo amaninzi amaxesha ngamaxesha yonke imihla-ngokuthe ngqo. Ibe sisigcini-xesha, ukwanda kokuhamba kokuhamba komsebenzi, nokunye okuninzi.
"CopyPaste Pro: I-clipboard yamandla omsebenzisi we-OS X. Ufuna ukuhlela ngokukhawuleza nangokufanelekileyo? Ufuna iCopyPaste Pro ye-OS X. Ukuphuculwa kwesantya xa usenza ukuphindaphinda ukwenza kufuneka kuyamangalisa. Esi sisixhobo samandla ngokuqinisekileyo. kumsebenzisi wamandla kwaye ufumane i-Gearhead rating ye-5 kwezi-5. "
UMark Gibbs, uGearheadINethiwekhi yeHlabathi
Jonga enye yezinto endizithandayo Mac. Ibizwa ngokuba yiCopyPaste Pro. Ngumphathi webhodi eqhotyoshwayo. Oko kuthetha ukuba nayiphi na into oyinqumlayo okanye oyikhuphayo igcinwe kwilayibrari ukuze ibe nokudluliselwa kamva ngaphandle kokuyifumana kwaye uyikope kwakhona. Elo lixesha elikhulu lokugcina ixesha.
UTera uThomas O'BrienIncoko kaTera
Ich muss mich eigentlich iselfst yüber mich selbst wundern, dass ich diee Software noch nicht eher gefunden und im Einsatz hatte. Mittlerweile kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie ein Mac ohne diee App „funktionieren" soll. Kananjalo ich gehe jetzt mal von meinem „Arbeits-Mac" aus, a dem ich den ganzen Tag sitze und erst da spiel die Software ihren Nutzen so richtig aus. Im Gegenzug dazu hab ich noch ein etwas älteres MacBook Pro und da fehlt mit die Software überhaupt nicht. I-Seltsam nicht. Aber wie in der Üpentchrift schon angedeutet: „CopyPaste Pro ist sowas ähnliches wie eine TimeMachine für die Zwischenablage." Ich glaube dieer Satz beschreibt kurz und bündig, was die Software leisten kann.
UMarkus Ostermeier, iBloggerzelbanson.net
"Akukho suku ludlulayo ndingakhange ndisebenzise uKhuphela ukuCola. Enkosi kwakhona ngesixhobo esincomekayo."
"ICopyPaste Pro ngumzekelo wesicelo esiguquguqukayo ngenxa yokuba, ngokungafani nezinye iinkqubo zemveliso, inezinto ezininzi ezahlukeneyo zokusetyenzwa. Abaphuhlisi baphucule kwimisebenzi esisiseko yecomputer kwaye iziphumo zinobuchule. Kubonakala ngathi kuyakubonisa oku kwezinye iinkqubo zayo - ukuthatha iinkqubo zenkqubo ezilula kunye nokuzipompa zigcwele i-oomph kunye nezinto ezongezelelweyo.CopyPaste Pro indincedile kakhulu ukugcina ixesha kwaye kuluyolo ukusebenzisa - ngokulula kunye nenqaku-lesityebi .. Abanye abantu banokucinga, Nangona kunjalo, ukuba ixabiso lentengiso yi- $ 30 yale nkqubo yinto encinci kakhulu ukuba ungayisebenzisa kwizinto ezilula kodwa uya kufumanisa ukuba nje ukuba uyifumene, uya kuzibuza ukuba kwenzeka njani na ngaphandle kwayo.
UJames Cull UPhononongo lweStorm
CopyPaste Pro eyona clipboard yeyona Mac. CopyPaste Pro è l'utility più flessibile e potente tra quelle a disposizione sul mercato per anche l'impossibile con il kopia e incolla: gestisce clip multiple, crea Archivi di clip di testo anche edit, fornisce agli elenchi con palette Flottanti, accetta il trascinamento direttamente da safari, non parde la memoria neppure dopo il riavvio del Mac.
"ICopyPaste Pro isesona sixhobo siluncedo ongazange wazi ngaso ukuba uyasidinga. Iimpawu zayo ezingabalulekanga ngokwenene ziyawukhulisa umsebenzi wakho wemihla ngemihla."
"Ukuba unokuNesixhobo esinye seMveliso kwi-Mac yakho uze ukhethe i-CopyPaste Pro. I-CopyPaste Pro ihlala nje ngasemva, ilinde ukusetyenziswa, ukuqokelela ngokuthembekileyo kunye nokugcina nantoni na oyikophileyo okanye oyinqumleyo, ulungele ukuncamathisela izinto naphi na apho ufuna khona. Ngaphandle koluhlu olude lweempawu zamandla, iziseko zanele ukukuqalisa kwaye kulula ukuseta nokusebenzisa. Umntu obizwa ngokuba nguCopyPaste Pro Machine Machine webhodi yakho. Ngelixa ibonakala ngathi nguMatshini wexesha, ithimba kwaye igcine intle nantoni na onokuyikopa kwi-Mac yakho kwaye yenza ukuba ifumaneke nangaliphi na ixesha kwixesha elizayo.
"Into ebalulekileyo yokusetyenziswa kweMac yakho. Ngexesha ngalinye ukopa into onokuyincamathisela kwenye indawo, into oyikhuphayo ibanjelwe kwibhodi eqhotyoshwayo. Ingxaki ngeClipboard ngaphakathi kweMac OS X ngaba kukwakha ukuphatha into enye ngexesha elinye? Ngaba iluncedo ukuba ungazivelisa izinto ezininzi phaya, ukuze ubenokuncamathisela konke kuxwebhu olufanayo okanye enye ifayile yeprojekthi ngaphandle kokutshintsha phakathi kweapps? NgeCopyPaste Pro, unako.
Mnumzana James Galway,Umdumi oDumileyo weHlabathi
"Rhoqo kuvela isiqwenga se-shareware esenza ukuba sizibuze ukuba besiphila njani ngaphandle kwayo-enje ngeCopyPaste-X, isixhobo esisebenzisekayo se-turbo clipboard kwii-steroids."
UNiko CoucouvanisImagazini iMacAddict
Eyokuqala (ekhutshwe ngo-1997) kwaye idume kakhulu izixhobo zokunamathisela ezininzi ukubonisa, ukugcina kunye nokuhlela iikeyboard.
Umatshini wexesha weboardboard.
Bona kwaye uhlele naliphi na ikliphu kwimbali yakho yeekopi okanye ugcine iikopi kwiindawo zokugcina iikopi ezingapheliyo. Gcina iibhodi zokunamathisela ezininzi ngokuqala kwakhona. Ngokusebenziseka ngakumbi, ixesha lokusindisa, isigcini sobomi kubo bonke abasebenzisi beMac. Olona hlelo lokusebenza lwebhodi eqhotyoshwayo.
Ikopi yePhepha yintsusa, inye kunye nokunikwa kwamabhaso okuphumelela kumhleli webhodi eqhotyoshwayo kunye nokusetyenziswa koovimba.
Ikopi yePhepha ibalulekile kubaqalayo, ababhali, abahleli, abayili bemizobo, amagqwetha, abafundi, amashishini asekhaya, abafoti bezedijithali, nabani na osebenzisa ibhodi eqhotyoshwayo.
Ikopi yokuncamathisela yehabhu yedijithali yezinto zebhodi eqhotyoshwayo kunye nezinye iintlobo zeedatha. Kulula ukuyisebenzisa, igcina ixesha kwaye ikuvumela ukuba wenze kancinci kwaye ufeze ngakumbi. Yizame simahla kwaye ubone ukuba kubaluleke kangakanani umphathi webhodi eqhotyoshwayo.
Ngamaxesha athile iinkqubo zokusebenza zazingenalo unxibelelwano phakathi. Emva koko kwafika iMac kwaye enye yeempawu zayo ezintle yayiyibhodi eqhotyoshwayo ekuvumela ukuba ukope into ethile kwisicelo esinye emva koko uvule enye kwaye uncamathisele. Olo yayiluguquko ngo-1985 kodwa ngoku yinkulungwane elandelayo kwaye ukukopa kunye nokuncamathisela kwi-Mac OS akukhange kuguquke ngakumbi- nakwi-OS X yale mihla. Kukangaphi uzifumana utshintsha ubuya umva phakathi kwezicelo ezikopa into enye kwi ixesha, unqwenela ukukopa kungekuphela kwinto enye kodwa ezimbini okanye nangaphezulu ngexesha?
I-CopyPaste Pro yenye yeapps endiyithathela ingqalelo ENGANAKHOYO ekuhambeni kwam. UJulian Miller uphendula KAKHULU kwaye uluncedo! Ndingacebisa ukuba le app kunye nePlum emangalisayo!
UJim TerrinoniUkuhlaziywa kweMacUpdate, 9/7/20
I-CopyPaste Pro. Esi sicelo sisebenza ngokuzolileyo ngasemva, sikulungele ukubizwa rhoqo, kwaye ndiyisebenzisa mihla le. Kuyandisindisa ixesha elininzi. Zenzele ububele kwaye ukhuphele usetyenziso olufanelekileyo.
UMarcel DufresneUkuPhononongwa koBume, Meyi 28, 2020
"Inkqubo yakho" elula "inyusa ukuvelisa kum ngemilinganiselo enokulinganiswa. Njengomculi, ndiziva ndixhotyiswa kukhetho olukhawulezileyo kunye nolwenyukayo. Njengombhali, ndibona ukuhlelwa okuphindaphindiweyo, iziphumo ezijolisiweyo."
Amagama athile kunye neenkcazo zisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo ngaphakathi kwePhepha. Kunokuba luncedo ukuwakhumbula kwaye uqonde intsingiselo yawo.
yinto ekhutshelweyo, umz. iziqwengana zesicatshulwa
yinkqubo yebhodi eqhotyoshwayo
sisiqulatho seziqeshana zexeshana kwisitaki
yingqokelela yeziqwengana kwifayile
isetyenziselwa ukujonga nokutshintsha iiklip
Izixhobo zebhodi eqhotyoshwayo
sisixhobo esisebenza kwinkqubo nganye ngebhodi eqhotyoshwayo
Uhlaziyo lweVidiyo nguMacUpdate
Ukufakwa kwi-Mac OS 10.14, Kwi-Mojave
I-CopyPaste-Ukufakwa, iMbali yeClip kunye noGcino lweeKliphu
CopyPaste-Isikhangeli sesiqwengana kunye nePlats Palette
Ikopi yePhepha- Izixhobo
Abasebenzisi kunye nabaPhononongi baQeqesha malunga nePopyPaste
Ekuqaleni (Ngo-1997) Uvandlakanyo lweThuluzi leKlipboard yeKhomputha yokuqala
CopyPaste: A Scoffer Azisekho
Umoya weCopyPaste uyancomeka, kwaye -ba sele uzibonele ukuba uyasebenza - awukwazi ukuqonda ukuba kutheni ungakhelwanga kwiNkqubo yeMac OS iminyaka.
- UMate Neuberg, Uphengululo kwi-TidBits, 2/3/1997
MacUser I-CopyPaste enikeziweyo
-ijonga uhlaziyo lweveki ngasemva kwaye ikwazisa kuphela xa kukho into entsha. akusajongi kwisiqalo ngasinye
-ukungena ekuqalisweni okulungiselelwe i-monterey
- okunye ukuphuculwa okuncinci
-incwadana ehlaziyiweyo ukusuka ku-http ukuya kwi-https
-dityaniswe nge-xcode 13
- ezinye iinguqu ezincinci.
- lungisa i-6.7.92 eyenza umba wokuncamathisela kwabanye abasebenzisi.
-Isebenza kakuhle kwimonterey mac os 12
- Ukulungisa ukubekelwa ecaleni kukhetha ukungabandakanyi zombini ii-adobe indesign kunye ne-apple keyword
- yongeza i-notarization ye-app. into entsha yokhuseleko evela kwiapile.
-yale u-c kunye no-c osisigxina. Kwisicatshulwa esikhethiweyo ayikopi iklip ye-0 kodwa ibeka ikliphu kwindawo yokuqala ekhoyo kwindawo yokugcina ulwazi. ngaphezulu kusencwadini yemanyuwali.
-yalela c kunye nomyalelo v
-umlawuli wokukhetha u-c uvula indawo yokugcina izinto njengangaphambili
-umlawuli wokukhetha u-v uvula iphalethi yembali njengangaphambili
-yalela c (kunye nenombolo okanye ileta) iikopi kwezo ndawo yokugcina iinkcukacha njengangaphambili
-yalela v (kunye nenombolo okanye ileta) iipasile ezisendaweni yokugcina iinkcukacha njengangaphambili.
-ngelplipip (khetha itekisi kwaye ubambe ixesha lesiqhelo) isebenza njengangaphambili
-lungisa ukungangqinelani kwe-mac os 10.14.4 ukungaphumeleli okwaphule umthetho c.
-Zonke iinkqubo zokusebenza kunye nokusetyenziswa kweefolda kwifolda yesicelo kuya kubonisa kwaye kungakhethwa kuluhlu olungafakwanga.
- okwahlukileyo kubhalwa ngokulandelelana koonobumba kwaye ngaphezulu ungacofa ukuze uhlele okanye uhlebe.
-eongezwe 'Uluhlu lokukhuphela' ke iyafumaneka kulo lonke ulwimi.
-Incwadi ehlaziyiweyo yendlela entsha ekhethiweyo yoLuhlu lweNdawo
-hlaziya zonke izikrini zecala ngalinye elithandwayo
Enkosi kubo bonke abasebenzisi ngengxelo yabo entle!
- yongeze 'uluhlu lokukhuphela' kwi-tab ngokukhetha. ukulinda ixesha elide okulindelekileyo ukuba bangabandakanyi iiapps ekusebenziseni kunye nekopi. nantsi eminye imizekelo. ingasetyenziselwa usetyenziso olungazilandeli izikhombisi-bhodi ze-apile. nabaphathi bephasiwedi. umbulelo omkhulu kwi-eric crouch, eyona yakutshanje kumqolo omde wabantu abacebise ukongeza eli nqaku.
-lindela uhlaziyo oluninzi. ukuba uneziphakamiso zeapps okanye incwadi esisikhokelo masazise
-Ukuba uthenge ikopi ngaphezulu kwe-2 kwiminyaka eyadlulayo unokufumana isaphulelo seminyaka emi-2 yokuhlaziywa kunye nenkxaso ngokunxibelelana nathi.
-khumbula ipaneli yokugqibela ekhethwe kwezi zinto uzikhethileyo. enkosi kwi-gabriel dorado ngokuhambisa le bug.
-uphucula umyalelo wekopi kwiimeko ezininzi.
-dityaniswe ne-xcode yamva nje
-ikopopu isebenza 100% kwi-mac 10.14
-itshintshwe ezinye zeincoko zisebenza bhetele kwimodi emnyama.
ukuba unawo nawuphi na umbuzo qhagamshelana nathi ngqo.
Abasebenzisi bekopi zeCopt, siyayonwabela ingxelo yakho. Ngoku lixesha! Ukuba uneziphakamiso, imiba okanye utshintsho kwincwadana yemigaqo, nceda wenze uluhlu kwaye uluthumele ngaphakathi. Asinakukwenza yonke into kodwa siya kuzama ukwenza izinto ezizuzisa 90% yabasebenzisi.
- [esisigxina] isikrini esichazayo ukuba siqale
-[[ehleliweyo] iyasebenza ngoku ukongeza ukopisho kukhuseleko kunye nokuba ngasese: iphaneli yokufikelela. umsebenzisi usafuna ukunikezela ukufikelela.
-Umcimbi oqulunqiweyo wokuqulunqwa kwekhowudi endala.
-kukhoyo ngoku kwi-mac os 10.14 i-mojave yongeza ukhuphelo ngokuzenzekelayo kukhuseleko kunye nokuba ngasese: iphaneli yokufikelela ukuze abasebenzisi banikeze imvume yokushicilela ukusebenzisa iklipboard. abasebenzisi kusafuneka bavule iphaneli kwaye bahlole ikopi ukuba banike imvume.
nceda yenza incwadi yokufaka elolu hlobo. cima ingxelo onayo kwaye ukhuphele kwaye ubeke oku kwifolda yesicelo.
jonga uhlaziyo ngoku olusetyenziselwe ixesha elizayo.
-mfutshane url yaphukile ngoku ihleliwe.
-indlela emnyama ngoku iyasebenza
- uhlaziyo oluninzi oluzayo ...
-inguqu ezininzi kunye nomsebenzi omninzi ukuzisa ikopi kukuhlaziywa kunye neenguqu zamva nje ze-mac kunye nokhuseleko lwe-apple & notshintsho lokusayina. Enkosi ngokunyamezela. ukuba ufumana nawuphi na umba nceda usazise.
-ewe, le nguqulo isebenza kwi-Mac OS 10.6 - 10.12
-Utshintsho lwangaphakathi ekwamkeleni iindidi zedatha.
-Ukulungiswa kokuncamathisela ukubuyela okungaphezulu kwi-Apple Numbers, Keynote kunye naMaphepha.
-Isixhobo esitsha "sokuBalwa kweLizwi kunye nokuFikwa".
-Tsala kwaye ulahle phakathi kweepletts ezisisigxina.
- Iziqendu ezigcinwe kwindawo yogcino zigcinwa ngokukhawuleza ukukhusela ukulahleka kwedatha kwengozi.
-I-CopyPaste isayiniwe ngoku. Yay, ekugqibeleni! Iiapile zakutshanje securithy yayiyibhere yokufumanisa kodwa yenziwe ngoku. Oko kuthetha ukuba akusayi kuphinda kuvulwe kuqala ithi "Ngaba uyafuna ukuvula le sicelo ngumphuhlisi ongaziwayo". Ngoku siza kubuyela ekusebenzeni uhlaziyo kunye nokuphucula iCopyPaste. Enkosi ngomonde wonke umntu.
-Idityanisiwe kwaye yandlalwa ngeXcode 5 yakutshanje
-Ibhontshisi ayisasebenzi ngokuhlaziywa ngumbhali wayo ngoko ke siyisusile sayibuyisela endaweni yokusebenzisa iTxtEdit
-ihlaziyiwe kuhlobo olutsha lwe-xcode.
[Lungisa] ukumisela ibug isebenza ngegama lamagama kwezinye iimeko.
[Entsha] yenziwe ngo-10.8
[Okulandelayo] kuya kutyikitywa kwinguqulelo elandelayo. Kwi-10.8 setha ukhuseleko kunye nobumfihlo: ngokubanzi ukuvumela usetyenziso olukhutshelwe naphi na.
[Mod] Guqula kutshintshe iapps ukukhangela uhlaziyo. Nceda ukhuphele le nguqulo kwaye uyisebenzise nangona inguquko elula iya kunceda iseva yethu ukuba ijongane nohlaziyo olungcono.
[Intsha] icon entsha
[Isitshixo] Isikrini esitsha esichazayo
[Imodyuli] Xa ucofa kwiPhalette engenanto yoLondolozo, ngoku iwindow yedrowa iyavula kwaye ivumela ukhethe iVenkile eyahlukileyo.
[Ihlaziyiwe] Idityaniswe ne-xcode yamva nje. Uphuculo oluninzi kunye nokwanda. Utshintsho kwincwadi yemigaqo.
[Entsha] amaqhosha amatsha okhetho lokukhetha abonisa ukuba uMfumani ukhetho kunye nezinye iifayile Copypaste zisebenzisa.
[Ukuhlaziywa] Kubandakanywa nohlobo lwamva lweBean (igama lesiprinta kwiCopypaste). Ndiyabulela kumyili kaJames Hoover Bean.
[Imodeli] Ngoku i-Universal 32/64 Intel kunye ne-PPC 10.5 nangaphezulu
[Entsha] Inketho entsha yokukhetha ukuvula isandi sengxelo yekopi zekhibhodi
[Imodyuli] iziqendu ezivela kwiMicrosoft Word ngoku zithathwe kukususa i-OLE nolunye ulwazi lweKhonkco.
[Imodyuli] Umboniso wokuvula wepletthe xa usebenzisa i-command-ctrl-ukhetho-v (okanye c) akabonisi amaqhosha enkunkuma ekuqaleni ebephazamisa.
[Imodeli] uBhontshisi wakutshanje ubandakanywe nohlobo lwe-2.9.6 beta.
[Yongeza] ngoku ngokupheleleyo ezingama-64
[Imodyuli] ngoku ye-10.5 nangaphezulu. le nguqulo ayisebenzi kwi-tiger Mac OS 10.4. Copypaste 3.0 yinguqulelo yokugqibela ka-10.4.
[Imodeli] ephuculweyo yasekhaya
[Yongeza] Olunye uhlaziyo oluphambili kubanini beCopyPaste Pro.
[Yongeza] Ukhetho lweClip Revolver. Eli nqaku likhona kuhlobo oludala kakhulu lweCopyPaste. Abasebenzisi bayicelile ke ukuze siyisebenzise kwakhona. Nantsi indlela esebenza ngayo: vula i-Clip Revolver kwiinketho uze ulandule-ukhetho-v iifestile kunye nokubonisa i-clipboard yokugqibela. Oku kunokuba kusetiwe kulukhetho.
[Fix] silungisa ibug xa isindisa iziqendu zembali kwindawo yokugcina izinto eziye zabangela ukuba i-cp ingasebenzi.
[Mod] ngoku kunokwenzeka ukucima ikliphu enye kwimenyu ephambili ngokubamba iqhosha lokulawula ngelixa ukhetha ikliphu kwimenyu yokuncamathisela. ukucima imisebenzi kuyo yonke imbali kunye nokugcina kwiziqendu.
[Lungisa] okoko kutshintsho ku-2.3 lube lolwakhiwo olutsha lwangaphakathi lwedatha bekukho umba wokudonsa nokwehla nokwabiwa kweencwadi ezishushu. Zombini ngoku zilungisiwe.
[Lungisa] le nguqulo ilungisa ibug ngo-2.3 apho ikopi kuVimba inokuthintela imisebenzi yesiqhelo yebhodi eqhotyoshwayo.
[Imodyuli] entsha yerekhodi ebhalwe ngokutsha entsha eya kuba sisiseko seempawu kwiinguqulelo ezizayo.
[Imodyuli] iza kusebenza ngcono kwezo kwi-Mac OS ye-10.4 endala
[Lungisa] umhleli awusavuli ngengozi ucofe kabini kuyo nayiphi na imifanekiso kwiPlip yeziqendu.
[Ukulungisa] kulungisa ingxaki ye icon eyenzekileyo xa utshintsha ubume bescreen.
[Lungisa] Ukulungiswa kwe-bug encinci
[Imodyuli] amakhonkco kuhlobo olutsha lwencwadana yemigaqo.
[Lungisa] le nguqulo ilungisa ezinye zeengxaki ngokulungisa iziqwengana zikaVimba.
ngakumbi kuza kungekudala ....
[Yongeza] Le nguqulo inokhetho olutsha lokukhetha ukuhlengahlengisa ubungakanani befonti yeziqwengana eziphathwayo. Ukungagqibeki yinqaku eli-11. Uluhlu olusebenzayo ngoku ukusuka kwi-9 ukuya kwi-24 amanqaku. Ungavula ukhetho kwaye ukuba iphalethi iyabonakala, unokuwubona kwangoko umphumo xa uqinisekisa ubungakanani obutsha ngethebhu okanye ubuyile.
[Mod] yongeze uhlobo lwamva nje lweBean (igama lesiprinta kwiphepha lokushicilela) elilungisa imicimbi ethile uBean wayenayo ne-mac os 10.6. Ngenxa yotshintsho olwenziwe ngumbhali weembotyi kuya kuba lula ukuba nekopi edlulileyo usebenzisa uhlobo lwakwaBean.
[Yongeza] ivumela ukuphinda sibize iziqwengana. Kwipaneli unokucofa ikliphu ukuvula ikhabethe ngomboniso wokuqala kwaye utshintshe igama layo kwindawo yetekisi.
[Lungisa] hlaziya uhlaziyo lweparkle.
[Lungisa] ingxaki, yokuba iCopyPaste ihlala kwindawo yedoksi ngaphandle kokukhetha useto olukhethiweyo.
[Imodyuli] yongezwa iJapan
[New] yokhetho olukhethiweyo lokukhetha ukwenza / ukukhubaza ii-ayikhoni zokuhamba emanzini ngokwahlukeneyo kwindawo yokugcina kunye nembali.
[Lungisa] ukulungisa ingxaki ngokudlisa okungalunganga (enkosi kuMichael G ngentloko apha).
Ukuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwe-thru sparkle kunokungasebenzi ngenxa yoko ukhuphele kwaye ufake ngesandla ngeli xesha.
utshintsho oluninzi oluzayo kungekudala ....
[Mod] Universal 64/32 ikhowudi bit
[Mod] Idityaniswe nomhlanganisi omtsha
[Lungisa] Ingxaki yeTiger ne-Eudora esisigxina.
[Ukulungisa] Ezinye izilungiso zebug.
[Imodeli] ehlaziyiweyo yeClop Leopard Mac OS 10.6 ngoku ingama-64
[Lungisa] Imizobo kwisiphequluli sekliphu.
[Lungisa] imicimbi ethile efunyenwe ngumqokeleli omtsha.
[Imodeli] ehlaziyiweyo yegama elakhelwe-ngaphakathi (ikliphu) iprosesa uBhontshisi 2.3
[Yongeza] ungafaka umtya wokwahlula "Cola onke amaNqaku kwimbali / Archive"
[Dibanisa] i ^ d okanye i-t macro isetyenziselwa ukufaka umhla okanye ixesha kumtya owahlulahlulayo.
[Lungisa] Ukutshintsha kwemenyu Ukuhlela kunokwenzeka phantsi kweemeko ezothusayo. Ngoku ilungisiwe
[Ukulungisa] ukuhudula kunye nokuthoba phantsi kweCocaoa kufuna ukuba uhlobo ngalunye lweedatha lubhaliswe ngokwahlukeneyo nenkqubo. Ezinye iintlobo zegraphic azisebenzanga ekutsaleni nasekutsaleni kuVimba kunye nakwiincwadana zeembali kuba zazingabhaliswanga. Ngoku (ngale nguqulo) zingaphezulu kwe-100 iintlobo zeedatha ezahlukeneyo ezibhaliselwe ukuhanjiswa nezokuhla.
[Yongeza] Isixhobo se-URL Shortener sinemenyu ekukhetheni (Ngokubanzi) ukukhetha kwiinkonzo ezi-5 ezahlukeneyo ze-intanethi oza kuzisebenzisa ukufinyeza ii-URL.
[Entsha] yitshitshise ii-URL kwimenyu yezixhobo. Unxibelelwano lwe-Intanethi luyafuneka. Kukho iinkonzo ezininzi ezikhoyo ezinciphisa ii-URL. Sisebenzise i-http: //is.gd. Singabasebenzisa abanye. Zama ukuba sazise ukuba ucinga ntoni. Khetha i-URL ende efana naleyo yevidiyo zeYouTube, hit the Shorten URL tool ukuyenza ibe ngaphantsi ngama-20 amagama. Idilesi ethi " Olu hlobo lwento iluncedo kakhulu kwi-Twitter. Ukusetyenziswa okuninzi kukwincwadi yemigaqo.
[Lungisa] iintlobo ezahlukeneyo zeentsholongwane kunye notshintsho lwezithambiso.
[Imodyuli] Iibhontshi yendawo yesiDanish yongezwa
[Isixhobo] esiVulekileyo sesixhobo
[Isixhobo] esitsha somhla wamaSilamsi
[Imodeli] yokhetho olongezelelweyo.
[Imodeli] ikhetha ukulungelelanisa ukunamathisela ikliphu kunqakrazo kabini endaweni yokuyivula kuMhleli.
[Imodyuli] ekhethiweyo ukucima isiKhangeli sesiqwengana kwiHotkey. Isikhangeli sesiqwengana ke sifumaneka kuphela ngokomyalelo-imouse-isikrini.
Ukucima i-Browser hotkey kunika iinzuzo ezimbini:
1. Unokuphinda uyincamathisele ikliphu ephambili kwaye uphindaphinde ngaphandle kokukhupha iqhosha lomyalelo
2. Umyalelo olula v-unamathisela ikliphu yokuqala kwimbali ngelixa umyalelo-vv unamathisela iklip yevidiyo esetyenzisiweyo. (Yizame, uncamathisele i-v-2 kwaye emva koko uyele-vv eya kuncamathisela ikliphu # 2 ukusuka kuVimba kwakhona. Yalela nje i-v kwaye ukhuphe i-clip yokuqala kwimbali.)
[Mod] incwadana ehlaziyiweyo
[Mod] Danish Ukuguqulelwa
[Entsha] isebenzisa umsebenzi wokuncamathisela zonke iziqwengana kwimbali okanye ngoovimba ngokulandelelana.
[Mod] ijongisisa ukuba i-LaunchBar iyasebenza kwaye iyacebisa ukutshintsha useto olungahambelani lweLaunchBar.
[Ukulungisa] ivumela ukunqamleza kwindawo ebonakalayo
[Lungisa] ulungisa ingxaki ngeClipAppend yokungasebenzi ngokungaguqukiyo.
[Lungisa] ukhuphele ne-Dreamweaver
[Lungisa] into ngeWeb
[Entsha] imenyu yokujonga isixhobo sokubonisa umbandla ubandakanya into yemenyu yokuhanjiswa kweenkonzo zesicelo esinokusetyenziswa kwibhodi eqhotyoshwayo. Oku kukonyusa kakhulu inani lezixhobo zekliphu zokwenza idatha ye clip.
[Mod] Isikhumbuzo se-LaunchBar ngoku asibonakali kwiinguqulelo ezindala ze-LaunchBar ezazingahambelani.
[Lungisa] umba kwiPowerPC kunye neTiger (10.4) eye yaziswa ngotshintsho lwamva nje lwento yokulinganisa dreamweaver.
[Yongeza] Iipliphu zePliphu (Imbali kunye neeNkcukacha eziBalulekileyo) zongezwa.
[Yongeza] Tsala kwaye ulahle i-Clip Palette
[Mod] ibhokisi yobhaliso ngoku isusa nayiphi na indawo yabamhlophe kunye nabalinganiswa abatsha kwimigca edlulileyo okanye yokuchwetheza, oko kunciphisa naziphi na iimpazamo zobhaliso lomsebenzisi
[Mod] uninzi lweenguqu kukhetho lweCopyPaste Pro.
[Imodyuli] itshintshe ezinye zokunganyaniseki.
[Mod] Uhlaziyo olukhulu kwincwadana yemigaqo.
[Mod] le nguqulo yenza olunye ukhangelo xa ugcina amanqaku.
[Imodeli] utshintsho oluninzi lwe-UI.
[New] IsiDanish, IsiJapan kunye nesiJamani.
[Imodyuli] ngakumbi ukulungelelaniswa komsebenzisi okufumanekayo.
[Mod] Uhlobo olutsha lweBean esetyenzisiweyo.
[Imodeli] yeyona nguqulo ilungileyo yeCopyPaste.
[Imodyuli] ehlaziyiweyo yezixhobo zaseJapan
[Imodeli] yedrawer yangaphambili iyavala xa uqala ukuhlela ikliphu
[Mod] utshintshe umhleli weikliphu ukuze angabonisi iwindow engenasihloko engafunekiyo.
[Mod] Bean inezixhobo zaseJamani
[Yongeza] Iziqendu ezibhaliweyo zinokufakelwa ngumyalelo otshisayo-kukhetho-c. Oku kunokucinyelwa kwiimfuno.
[Imodyuli] Icandelo "Ngokubanzi" lokukhethwayo ngoku lahlulwe laba ngamacandelo amabini "Inkqubo" kunye "Jikelele" ukufumana indawo engakumbi.
[Lungisa] ukwaphuka kwiTiger (OS 10.4)
[Lungisa] ukungqubana emsebenzini Cola zonke iziqendu ukusuka kwiMbali / kuVimba
[Lungisa] ingxaki ukuba ikopi kwi-dreamweaver ayinakudluliselwa
Ukuba awuzange usebenzise i-Copypaste pro ke kubalulekile ukujonga kwincwadana leyo ilapha:
[Lungisa] ukulungiswa kwe-bug ezimbalwa
[Mod] iBean entsha equlathe i-bugfixes nayo.
[Mod] utshintshe iodolo lokulayisha xa i-CopyPaste iqalisa, ukuze i icon yebar yemenyu iza ekugqibeleni.
[Lungisa] Ukuqhaqha kwindawo ekhupha i-imeyile xa uyitsalela kwimifanekiso ilungisiwe.
Kwisiqendu esizayo ukubuya kweepletter ezithe nkqo.
[Lungisa] le nguqulo isungula i-Bean kanye kwinguqulelo entsha nganye. Kumele ukuba ibe nolwaziso olunye ukwazisa i-OS ngobukho beBean njengomnikezeli ngenkonzo.
[Lungisa] i-imeyile yokukhupha kunye nomsebenzi wokutsala i-url ngokungaguqukiyo kuzo zonke iimeko.
[Intsha] ubungakanani bokubhaliweyo kweklip yeKhangela yesiqendu ngoku inokwaluka ukusuka kuma-50% ukuya kwangama-200% (jonga iithebhu zopopayi)
[New] Ukuqalwa kwesiDanish kwongezwa
[Lungisa] Iingxaki ezimbalwa kunye ne-KeyCue zisonjululwe ngentsebenziswano nombhali we-KeyCue.
Ukulungisa] Umhleli weBean kufuneka ngoku evulekile kwaye ahlele ukhetho kunye neziqeshana
[Imodyuli] Ngoku, ukuba ucima zonke iziqendu kwindawo yokugcina ulwazi okanye imbali kwaye uqalise ukuqala kwakhona iisampulu aziphindi zivele. Baphinda baphinde babone ukuba ubume beefolda zooVimba okanye iMbali azisekho, ezinokwenzeka kuphela xa uzicimile.
[Mod] Ukuba "ugcina zonke iinxalenye kwiimbali" inkqubo ayimisi nje emva kokuqeshana ezingama-43 (isixa se-max seLondolozo) kodwa endaweni yoko kufakwa kwindawo yokugcina izinto ezintsha ezongeziweyo ukugcina inani leziqwengana.
[Mod] Ukongeza kwimisebenzi ye "Lock this Clip" kwimenyu yokuqukethwe kwikliphu yoLondolozo lweeVenkile unokuzivalela okanye uvule onke amaqhekeza kuVimba ngumsebenzi othi "Tshixa Zonke Iziqendu" kwimenyu yokuma komhlaba ukusuka ngasemva kwesiKhangeli esiqhotyoshelweyo.
[Fix] Ukulungiswa okungalunganga kwi-PPC / Intel ukusuka kwimenyu yokuma
[Lungisa] I-bug clip clip etyunjiweyo ihleliwe
[Ukulungisa] Ukutshintsha i-bug yoGcino kulungisiwe
[[New] Indawo yaseSpain iyaphunyezwa kodwa okwangoku iikhonkco kwincwadana yesiNgesi.
[Ukulungisa] ukungqubana okubangelwa yiplagi yemenyu yokuma kwi-Safari kunye neMeyile
[Lungisa] ukuphahlazeka xa iKhritshi yesiqwengana iguqulwe kuClip Archive kwaye ikopi eqhelekileyo yenziwa (yayiyimpazamo entsha ngo-1.0.2)
[Lungisa] indawo yokutshixa ebhodini ngoku isebenza ngokuchanekileyo.
[Lungisa] imenyu yesicelo ebonakala kuphela ukuba ukhetho lokhetho ukubonisa i-icon ye-Dock kunye nemenyu itshekishwe imisebenzi.
[Entsha] isiFrentshi sasekhaya kunye nencwadana yezikhokelo yongezwa
[ENtsha] isiFrentshi, isiJamani, iSpanisch, indawo yokuhlala yaseDenmark yongezwa kwiBean.
Imbali entsha yekliphu inomyalelo omtsha weemenyu umxholo wokubuyisela ukulandelana kweziqendu kwi Imbali
[Entsha] Imenyu yeCopyPaste inomyalelo omtsha kwiqosha lembali yesiqwengana ukubuyisela ukulandelana kweziqendu kwiimbali
[Entsha] iziqendu ezikwiClip Archive (hayi kwimbali!) Zibonelela ngomyalelo "wokutshixa ikliphu" ukuthintela ikliphu ukuba isuswe okanye itshintshe Ikliphu evaliweyo inika umyalelo "wokuvula ikliphu".
[Entsha] Okukhethwayo kunendlela entsha yokuseta i-Browser yeKhowudi yokuqala kwi-doube V. Ukuba oku kukhangelwe ungaya ku-Command-V ukuze ufumane isiKhangeli sesiqwengana nesiqwengana sokuqala esikhethiweyo (ngaphandle kokulibazisa). Ukuba awukhange ujonge imiyalelo elula u-v ubonise ibrawuza (emva kokulibaziseka), kwaye owesibini u-V ukhetha iklip yesibini.
[Entsha] Ukukhetha ikliphu elandelayo kunye ne-v ephindaphindiweyo ngoku kuyasebenza nokuba iBrowser isa "xhonywa "kulibaziseko olungenayo. Phambi kwale nguqulo i-v yesibini yayivavanywa kuphela xa isKhangeli sele ibonakala.
[Ukulungisa] ukungqinelana kwe-KeyCue, i-KeyCue HUD iwindow ayibonakalanga xa iCopyPaste ibonise isiKhangeli sesiqwengana. Silungisiwe kodwa sifuna uhlaziyo ku-.
[Lungisa] Imenyu yokuqulatha izinto zokugqibela kwizixhobo zekliphu ngoku ziyasebenza, azizange ngaphambili ngenxa yempazamo yabaphathi beenkqubo.
[Lungisa] Ingxaki kwinkqubo ethile ngokukodwa Ukukhuphela iiseli kabini zimiselwe
[Lungisa] Ingxaki emva kokuba ikopi engaphumelelanga ikhibhodi, ikopi elandelayo ayifumananga kwiClip History.
[Imodyuli] Unokubaleka kwiKhangeli ekuthiwa yi-keyboard ngaphandle kokuncamathisela ukuba ucofa iqhosha u-c. Oku kuqalisa ukujika isiphequluli, kodwa ukuba ukhulula zonke izitshixo ukujikwa kuyaphazamiseka kunye nokudlulisa nako. asikwazi ukusebenzisa isitshixo sokuhamba ngenxa yoku, kuba sibiza Front Row. Zonke ezinye izitshixo zisetyenziswa njengezitolo ezishushu kwindawo yokugcina izinto zakudala okanye azisebenzi. Zama ke isitshixo se-c ukuqhomfa.
[Mod] ngesicelo umhla wokuthenga nge-20 yeedola ukongezwa kude kube ngumhla wama-31 ukuvumela abasebenzisi inyanga epheleleyo yovavanyo. ukuqala ngoJuni kunyuka ukuya kwi-30 yeedola.
[Yongeza] Imenyu yomxholo ngoku inokufakwa kwaye isuswe kwi-windows ekhethiweyo.
[Yongeza] vula ibrawuza ngesitshixo senketho yenza ukuba ihlale ivulekile (inamathele).
[Yongeza] ukubrawuza isikhangeli ngesitshixo senketho kwenza ukuba ihlale ivulekile (inamathele).
[Imodeli] yeembotyi (umhleli weekliphu) ihlaziyiwe kuguqulelo 1.2.
[Mod] Uhlaziyo lwebhokisi yibhokisi yokukhangela kwiimfuno. Ihlala isenzeka ngokungagungqiyo. Ukukhangela ke kuhlola kube kanye ngeveki ukusuka kwimvelaphi.
[Imodeli] ubuncinci benxalenye yeenxalenye ezi-2 kwimbali emfutshane ngokwenene.
[Mod] incoko ngoku iyavela emva kweentsuku ezingama-30 ikhumbuza umsebenzisi ukuba athenge xa ​​kucinyiwe.
[Mod] indawo yokukhangela ikhunjulwe ukuqala kwakhona.
[Lungisa] useto lokungena ngoku luboniswe ngokuchanekileyo ngokubhekiselele kuguqulelo lokushicilela ukuze ukuba uqalise ukukopisha kwenye indawo, izakubonisa useto lokungena.
[Ukulungisa] ukungahambelani kwepopchar kunye nesishicileli kulungisiwe.
[Lungisa] iimenyu ezitshabalalayo xa umntu othile enomdla wokwenyani eseta inani leenxalenye ze-zero ezimiselweyo
[Lungisa] gcina ikliphu kwaye usete isitshixo esitsha esitsha seklip engasayi kuphinda ikhulule ikopi
[Ukulungisa] "Ukukhetha okuVulekileyo kuMhleli" kuhlala kuvulwa iikopi ngokulandelelana kwimenyu kuMhleli ngenxa yeflegi engazange ihlelwe kwakhona.
Ikhutshiweyo yokuqala kawonke wonke. ukuba awukaze usebenzise ikopi yokushicilela pro kubalulekile ukuba ujonge incwadana yemigaqo elapha:
[Yongeza] into entsha oyikhethileyo ukukhubaza i-Flip kunye noopopayi be-genie kwithebhu yoopopayi. umbono olungileyo kwii-macs ezicothayo.
[Yongeza] into entsha oyikhethayo xa xa uthenga kwiivenkile zonke utsalo kwaye ulahla kunye nezinye iikopi kwimbali. le yinto eyodwa eyahlukileyo yokugcina ikopi. Cofa kwaye utsale nawuphi na umfanekiso ngaphandle kwe-safari emva koko ujonge imbali yekliphu ukuyibona isebenza.
[Yongeza] okokuqala kubasebenzisi ngoku kukho iziqwengana zeedummy kwimbali noovimba. ezi zisetyenziswa njengemizekelo xa umsebenzisi usebenzisa okokuqala iprotypaste pro.
[Imodyuli] itshintshe imenyu ekhethiweyo ekhawulezayo eyehla kwi icon edadayo kwimenyu yonqakrazo okanye xa ugcina imouse icinezelwe kuyo (musa ukuhambisa, le imisa imenyu!)
[Mod] kukho ukulibaziseka kwe-1/3 yesibini yaziswa kwindlela yokuziphatha kwisiphequluli xa ivulwa kwi icon evumela ukudlula ngokukhawuleza kwifestile ngaphandle kokuyivala. kwaye evumela ukuyiirhuqa ngaphandle kokuyivala xa ushukumisa imouse ngaphandle kwefestile yebrowser ngaphakathi kwe 1/3 sec.
[Ibug] igcina iziqendu ezibangele iziphumo ebezingalindelekanga xa kususwe iiklip ezizodwa.
[Ibug] isitshixo esiya kwibrawuza isityisiwe.
-ngemva yemenyu entsha yemenyu equlatha evumela ukuba iigundwane ihambe kwi "Copy to Archive ..." command command to copy to the free slot in the Archive yangoku.
-myalezo omtsha ophambili, okt uyalela + kabini c (c kwaye emva koko c) ovumela ukukopa ngokuthe ngqo kwindawo elandelayo yasimahla kwindawo yogcino lwangoku
-Imenyu eyehla kwi icon esel 'edadayo ibonisa ezinye izinto onokukhetha kuzo ezinokubekwa ngokukhawuleza apha kunokuba zivela kwi windows zokhetho.
-Imithombo yeembotyi zakutshanje ihambelana neemfuno zeCopyPaste kwaye iBean entsha iyibhanti. Kuyimfuneko njengesiqhelo ukucima zonke ezinye iinguqu zeBean, kubandakanya nezo zinguqulelo zakudala zeCopyPaste (ungagcini iinguqulelo ezindala zekopi yokujikeleza), uMbonisi angazukubonakalisa kwiziphumo zophando. ukuze isebenze ngokugqibeleleyo iCopyPaste kufuneka ifakwe kwincwadi yolawulo.
-le yona isebenzisa iqhosha elitsha "elilahlekileyo" kwiinketho,
-Imenyu yeCopyPaste evela kwi-icon edadayo ngoku isebenza ngokuchanekileyo
-enza i-Sticky command kwi-menyu yokuma kwimixholo yesikhangeli
-Ukulibaziseka kweKopi esheshayo kunokuhlengahlengiswa (umbono ka-pieter)
-Ungavula ngoku isikhangeli usebenzisa i icon encinci yeboardboard.
-Ukucofa i icon encinci yeboardboard ngoku ujika isiphequluli.
-qakraza kwaye ubambe (okanye ucofe i-ctrl) kwi icon encinci yeboard clip ebonisa imenyu yokushicilela
Zombini ezi zinto ziyasebenza ukuba uphawu lwebhodi eqhotyoshelweyo luyaboniswa kwaye lilawulwa kukhetho.
-kusebenza kwekopi ngokukhawuleza (ukusuka kwikopi yakudala) ngoku kunokwenziwa ukuba kukhethwe. Khetha into kwaye ubambe iqhosha le mouse kwimzuzwana elinye kwaye ulikhuphe. Cofa kwindawo ethile kwaye ubambe iqhosha lomzuzwana omnye kwaye lidlulisa.
Iqhosha elitsha kwimisebenzi ekhethiweyo ivumela ukungenisa izixhobo zentshinyalala ezivela kwikopi-x (qaphela ukuba unendawo yokugcina ikopi esele ikho enegama elifanayo, lo myalelo uzakubeka endaweni yoko iziqwengana kulondolozo.) qinisekisa ukuxhasa naliphi na ikopi endala. oovimba ngaphambi kokusebenzisa oku.
-ophawu lwebhodi eqhotyoshelweyo edadayo (ukuba kukhetho) ikwazi ukuzifihla ngokwayo ukuba umdlali we-dvd, vlc, imehlo langaphambili liphambi.
-Ukukhetha ngoku kugcina abasebenzisi nge-imeyile kunye negama lokugqitha uze ubathelekise ngexesha lokwazisa. Oku kwenza ukuba kunyanzeleke ukuba uphinde ufake ulwazi lokubhalisa. exterminator @ umsebenzi uyasebenza kodwa uza kuphelelwa kungekudala.
- Imenyu entsha yenkcubeko enqanda ukonakala xa ikopi ayisebenzi. oku kuzifaka ngokwako, kodwa kuya kufuneka uyeke iposi kunye nohambo kwaye uyiqale kwakhona. Isizathu kukuba inkqubo isoloko yenza ikopi yazo zonke iikhompyuter zemenyu plugins kwimemori yenkqubo nganye esebenzayo. ke ngoko nokuba ufaka iplagi yemenyu entsha, eyindala isetyenziswa logama ungavumeli yonke inkqubo. Eso sisizathu sokuba ngamanye amaxesha kuye kufuneke uqale kabusha ikhompyuter iphela.
-ezinye izilungiso zebug.
-Ungakopa ngokuthe ngqo kwindawo yokugcina imenyu kwimenyu. Qokomisa isicatshulwa esithile uze ukhethe slot esele ukhona, ikliphu iya apho. Ukuba uvumela i "Copy to Archive: .." into yabazali kwimenyu, unokongeza ikliphu kunye ne-hotkey elandelayo yasimahla kwiVenkile. Ukuseta i-hotkey eyahlukileyo yogcino olo kufuneka usebenzise i-keyboard command-c- # okanye kamva unokutshintsha nayiphi na hotkey eyabelweyo kwiqhosha leencwadi.
-Ukuba usebenze "uboniso lwebrawuza kwi mouse yemiyalelo kwisiphelo sesikrini" ufumana isikhangeli ngombono wokugcina kwiphepha lasekunene kwaye kwicala le-LEFT ufumana isikhangeli kumbono wembali. indlela yayo ekhawulezayo yokujonga iziqendu. Umyalelo-c ukubuya kwindawo yokugcina imbali kwaye ngokuchaseneyo uyasebenza
-Izimvo ze-imeyile ngoku zaphula umgca emva koonobumba abangama-80 (ngaphantsi kokuba umda wamagama kamva)
-Ungahlela ikliphu nganye ngokubamba iqhosha lokuyalela kwaye uye kwimenyu yezinto zembali kwaye uzikhethe. Ukwenza oku kuya kuvula ikliphu kwiBean Oku kukwasebenza nakwimixholo yezemeko.
-Ungahlengahlengisa ukhetho lokhetho lokuncamathisela ngaphandle kwezitayile kubhabho ngokucinezela iqhosha lokukhetha nokukhetha unamathisela kwimenyu. Oko kuthetha ukuba udla ngokuncamathisela okubhaliweyo ngezitayile kwaye ucinezela iqhosha lokukhetha, liwanamathisela umbhalo ocacileyo ngaphandle kwesitayile.
Oku kusebenza kwimenyu yokusetyenziswa kwakhona.
-Inqaku elinye libonisa unxantathu omncinci kunzima ukubetha kwisikhangeli. Akukho mfuneko yokubetha unxantathu ukuba usebenzisa iqhosha leqhosha lasekunene, (okanye ukucofa kumnwe kuminwe emibini). Unxantathu ukhona kwabo bangaziyo ukuba bayifumana njani imenyu ngokuchofoza ekunene.
Isixhobo esinye esitsha "Ukukhetha okuVulekileyo kuMhleli"
Isixhobo esinye esitsha "Thumela ukhetho kwi-imeyile"
- Isixhobo esinye esitsha "Ukukhetha okuvulekileyo njenge-URL"
-Ufakelo lweemenyu zomxholo ngoku ususa inkqubo endala yeCopyPaste-X kunye ne plugin yangaphambili.
Qiniseka ukuba ufaka iplagi yemenyu entsha. Iplagi yemenyu yokufunda ihlaziywa kwakhona kwaye kufuneka itshintshwe ukuze ihambelane notshintsho olungentla.
-ibhontshi (umhleli weikliphu) yakhiwe ngaphakathi. ivuliwe ngokusebenzisa isiphequluli sekliphu.
1. Iinguqulelo ezindala zeBean kunye neCopyPastePro kufuneka zisuswe kwifolda yeeNkqubo
2. Ikopi yayo kufuneka ikhutshelwe kwifolda yoSetyenziso
3. Kuya kufuneka uyiqale kwakhona inkqubo (okanye ungene ngaphandle ungene) ukuze wazise inkqubo yeBean ngaphakathi kwiCopyPaste.
-ibhrawuza ekhethiweyo icinyiwe ngokungagqibekanga kwaye inokuvulwa kwiikhetho.
-ukukhawuleza kuyo yonke imisebenzi.
ayihlaziywa okwangoku kule nguqulo intsha. izakuba ngokukhawuleza kule veki emva kokuba siyikhuphe le beta. Nabani na (nawuphi na umhloli we-beta) okonwabelayo ukusebenza ngeemanyuwali wamkelekile ukuba azibandakanye nam ekuhlaziyeni nasekuphuculeni oko.
Kwinguqulelo yokugqibela kukho ukulibaziseka okuthile xa kusetyenziswa ugcino lwekliphu ngomyalelo- # isitshixo-combo esidala ukuhambisa iziqendu ezingalunganga. Oku kufuneka kulungiswe. ugcino lwekliphu alusebenzanga ekubhalweni kweslotshi ekhoyo. ilungisiwe
iimbotyi (igama lesiprinta)
iimbotyi ngoku zidityaniswe kwi-Copypaste (isiqwenga sesicelo), into elungileyo, kodwa (kubalulekile) kufuneka unakekele izinto ezintathu:
1. Iinguqulelo ezindala zeembotyi kunye neypypastepro kufuneka zisuswe kwifolda yezicelo
2. Ikopi kufuneka ikhutshelwe kwifolda yesicelo
3. Kuya kufuneka uyiqale kwakhona inkqubo (okanye ungene ngaphandle ungene) ukuze wazise inkqubo yebhotwe ngaphakathi ikopi.
ude uzenze ezi zinto zontathu, awunawo uvavanyo lwebhodi eqhotyoshwayo usebenzisa i-bean.
Okukhethwayo kucocwe kancinane kwaye okungagqibekanga kubekiwe kungadideki.
"Ukuqaliswa kokungena" ngoku yibhokisi yokujonga kwaye ichaza ubume benkqubo kunye nokusebenza kuyo, oko kuthetha ukuba uyabona ukuba ngaba ikhona na * nayiphi na ingxelo * yobuprinta ebhaliselwe ukuqala ukungena. Ukuba ukhubaza kwaye emva koko wenze ibhokisi yokukhangela, unokuqinisekisa ukuba ingxelo yangoku ye-Copypastepro ibhalisiwe ukuqala ukungena. Ukuba kamva usebenzisa inkqubo oyikhethayo ukungabhalisi i-Copypastepro, ibhokisi yokutshekisha iya kubonisa oko ngokuchanekileyo kwaye akazami ukuphinda ubhalise ikopi. Le yayiyindlela enye yokuziphatha gwenxa kwikopi-x.
Kukho isicwangciso esitsha sokuvula isiphequluli kwi-command-mouse-to-to-screen-edge. Oku kucinyiwe ngokuzenzekelayo. Ukuziphatha kuguqukele kancinane, ukuze uqale ubambe isitshixo-somyalelo kwaye emva koko ususe imouse. yayiphazamisa kakhulu ukuba nemouse emaphethelweni kwesikrini kwaye ufumane isikhangeli xa ufuna ukusebenzisa iqhosha lokuyalela eminye imisebenzi. indlela yokuziphatha kufuneka yanelise.
Umatshini wokuhlaziya utshintshile ngaphambi kokuba usebenze kodwa ubeke iwindow yendawo enokuthi ngamanye amaxesha ibe emva kweefestile kwaye kufuneka igxothwe ngelishwa ishiya iimenyu zokuprinta zonke zimpazamo kwaye abantu bebuza ukuba bayeka njani ikopi.
-indlela entsha yokufikelela kwibrowser ethe tye. bamba iqhosha lokuyalela kwaye ususe isikhombisi kuyo yonke indlela uye ngasekunene okanye ngasekhohlo kwefestile.
-isixhobo esitsha kwimenyu yokunqakraza umxholo ukuthumela umxholo ngeposi.
-isusile isiphequluli esime nkqo (iya kubuyela ngendlela eyahlukileyo).
-jonga imenyu yohlaziyo kunye nekhowudi eyongeziweyo (ayisethwanga ukusebenza ngoku).
-umhleli weembotyi ukongezwa ukulungiselela ukuhlelwa kunye nokugcina iziqeshana (imbali okanye oovimba)
-ibonisa iikliphu kwisikhangeli njenge-RTF okuthetha ukuba izitayile kunye nemibala ifakiwe.
-ibhrawuza ethe tye ngoku isebenza bhetele kwaye ikhawuleza kunye neziqwengana ezingama-50 okanye ngaphezulu kwimbali.
-izinye izinto ezininzi ....
Uhlobo lwakutshanje luhlala lufumaneka kwisiza okanye apha umxokozelo. Sicebisa ukusebenzisa inguqulelo yamvanje.
Jonga i-ChangeLog ngumahluko kwiinguqulelo ezindala.
Inguqulelo yokugqibela yayiyi-3.7.9. Cofa apha ukuze uyikhuphele. Isebenza kakuhle ngeMac OS 10.13-12.0
Le nguqulo yakudala iCopyPaste 3.7.4 isebenza neMac OS Sierra 10.12
Le nguqulo yakudala iyaziwa ukuba isebenze nge-TextExpander
Le nguqulo indala kakhulu yeyokugqibela ukusebenza neMac OS 10.4
Ukuba ufuna inguqulelo ethile yakudala sazise kwaye siza kuyongeza apha.
Nalu ikhonkco lokukhuphela le ncwadana ikwifomathi yePDF okanye ujonge le ncwadana ilapha ngezantsi.
Ndifuna ukuvakalisa umbulelo wam ngeCopyPaste Pro endiyisebenzisileyo ukusukela kunyaka endifumana ngawo iMac yam yokuqala ngo-1988. Ezinye izinto endizithandayo ziye zaphela, njengePageMaker, kodwa ezinye ezinje ngePopepaste Pro, kunye nePopChar, bezikhona mac endikhe ndanayo. Xa ndifumana imac entsha ndibabeka bobabini kwangoko. Andazi ukuba abantu baphatha njani ngaphandle kwebhodi eqhotyoshwayo enememori. Ke enkosi!
“Awunakuphila Ngaphandle Kwayo. NjengoMlawuli weDesika yoNcedo kuMbutho weSizwe weeNgcali zeFotohop (NAPP), ndiphendula ukuya kuthi ga kwimibuzo ye-imeyile eyi-100 yonke imihla. Njengoko unokucinga, amalungu amaninzi e-NAPP angena kwiingxaki ezifanayo nakwimibuzo rhoqo. I-CopyPaste indigcinela amawaka amagama wokuchwetheza yonke imihla, indivumela ukuba ndinikeze iimpendulo ngothotho lweendlela ezimfutshane ezinqumlayo. Ngaphandle kweCopyPaste, ixesha lam lokuphendula liza kuhamba kancinci kwaye kuya kuba nethuba elikhulu lokungachaneki okungena kwiimpendulo. ”
Pete Bauer UMlawuli weDesika yoNcedo yeNAPP
“Kulungile! Kudala ndisebenzisa i-CopyPaste ukusukela phakathi kwe-1990's. Ibaluleke kakhulu. I-Apple bekufanele ukuba ifake i-CP kwi-Mac OS. Enkosi ngokwenza ubomi bube lula. ”
“Kuhle! inkumbulo yememori ngoku incinci kwaye ihlala ihleli. Ndifumanise ukuba esi sicelo senza umsebenzi waso wokukopa kunye nokuncamathisela ngokukuko (amaqhosha amafutshane alula) kunesinye isicelo esikhuphisanayo. kucetyiswa kakhulu.
"Ndihlala ndihlawula umrhumo wokuqala iMac entsha kuba ndiyayithanda le mveliso, lelona xesha longa kakhulu onokulisebenzisa xa ufuna ukusebenzisa iimpendulo ezisemgangathweni kuyo nayiphi na i-imeyile. Eyona nto ilula njengokubala. ”
"IkopiPaste-X kanye njengaphambi kwayo kwi-MacOS ingumsebenzi wobugcisa. Awuyi kuba nakho ukucinga ukuba wenze njani ngaphandle kwayo. Umsebenzi omtsha wokuhlela ngenkxaso ye-pdf kunye nokukhangela okungacacanga (nokuba uya kwizandi ezifanayo) KUKHULU! ”
“Esona sihle. Isetyenziswe ubuncinci amaxesha angama-20 ngosuku. Ukuba indala kwi-Mac 9.2, le intsha inezinto ezininzi ezintle kakhulu kumntu obhalayo okanye ohlela kakhulu. Yeyona mveliso ibalaseleyo kwaye kuyonwabisa ukuba nayo. ”
“Inkqubo ebalaseleyo. Le yeyona software ndingasayi kuba nayo ngaphandle. Ndiyisebenzise iminyaka kwaye andinakucinga ngokusebenza ngaphandle kwayo. Amaxesha ambalwa bendinombuzo uJulian awuphendule ngokukhawuleza. Akandazi, kodwa undiphatha njengosapho ukuba akungcono. Enkosi ngenkqubo ebalaseleyo. ”
"Ndiyayiqalekisa iApple ngokungandivumeli ndikope ngaphezulu kwento enye ngexesha." Kodwa indumiso ibe yinkqubo yesisa. KwiShareware.com, ndiye ndafumanisa isicelo esandisa ukukopa kwam okuphindwe kalishumi. Izixhobo zokukhuphela isicatshulwa seCopyPaste kukuvumela ukuba uguqule imeko, ithebhu, okanye ufake iifayile zombhalo, imifanekiso, kunye nezandi kwibhodi eqhotyoshwayo-iphalethi edadayo igcina umkhondo wento apho. Nokuba ucoceko lwekliphu lucocekile, oluthi luphose izinto ezikhutshelweyo kwifolda kwi-desktop yakho - ezilungele abaphandi bakwi-intanethi. - Kaninzi…
UDebbie Elkind, imagazini eneentambo
"Uyakufumanisa ukuba i-CopyPaste incinci ngokumangalisayo kwaye, njengoninzi lwezinto endizithandayo endizithandayo, inobuntu obuneentloni-ungayithumela kwaye iya kubuya ngobulumko kwi-beck yakho kunye nokufowuna." - Kaninzi…
“Kwabo benza naluphi na uhlobo lokubhala, iCopyPaste-X sisixhobo esibaluleke kakhulu ekulula ukusifunda, kwaye xa uqala ukusisebenzisa, uya kuzibuza ukuba uhleli njani ngaphandle kwaso. 4.5 ngaphandle kweempuku ezi-5 Kaninzi…
"Ikopi yePhepha: I-Godsend yaBasebenzisi baMandla kunye nee-Novices ngokufanayo"
“Le yinkqubo encinci ethandekayo. Inika uninzi lomsebenzisi onamava, kodwa kukho imiba yayo eya kuba luncedo kakhulu kumqali wokuqala. ” - Kaninzi…
“Ekuphela kwento endiye ndahlala ndiyinyani kuyo kukukopa okuthandekayo okuhlala kuvela kubantu abathandekayo kwiSoftware yeScript. Ikopi yePhepha xa ukhutshiwe, ikunika iibhodi eziqhotyoshwayo ezili-100 onokuncamathisela amaqhekeza amaxwebhu, ii-URL ozifunayo kunye nayo nayiphi na into ofuna ukuyigcina uphinde uyisebenzise kwakhona. ”
Inqaku leVancouver Sun
“I-voulez ye-voulez ye-totalement is vos presse-papiers (les sauvegarder, les éditer, les organizer par thme), CopyPaste is fait pour vous. De même, si vous voulez être uncedo de la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider. It is vens la densité de possibilités, les 30 $ demandés ne semblent pas exagérés. - Kaninzi…
“Ndisebenzisa iCopyPaste Pro 2.0 (ebhalwe nguPeter Hoerster noJulian Miller) ngalo lonke ixesha! Yeyona nto ibalulekileyo yokongeza isoftware kwiMac yam!
Ligama nje lombulelo ngohlaziyo lwamva nje kwi-CopyPaste: luphuculo olunobunkunkqele kwimbonakalo yangaphambili. Ngokwenyani yenye yezona ziqwenga zibalaseleyo zesoftware eyongeziweyo ekhoyo. Kudala ndiyisebenzisa kwaye bekuya kuba nzima ukuhlala ngaphandle kwayo. Ngoku kubhetele! Ngeminqweno emihle.
Ngaba ayikho iMac ngaphandle kwayo!
Enkosi ngokuzisa le nguqulo intsha yeCopyPaste kwintengiso. Kudala ndisebenzisa i-CopyPaste ukusukela ngo-2002 (OS9), kwaye ndithembele kuyo yonke imihla! Ndizikhuphile ezinye ii -apps zebhodi eqhotyoshwayo, kodwa i-CopyPaste yeyona nto ibalaseleyo! UDave Wheelock
Andinakucinga ukusebenzisa iMacintosh ngaphandle kwale- kubonakala kum ukuba sisixhobo sokufaka injini elungileyo.
U-Leslie Benscoter, u-Deadwood, e-Oregon
Ngokuqinisekileyo kubalulekile. Andikwazi ukubala inani lamaxesha ngosuku ndisebenzisa iCopypaste. Nonke niyazi ukuba iMicrosoft kwaye ngoku uApple ngoku uza kukopa kwaye ancamathisele olu luvo kwii-OS zabo kwaye angakuhlawuli, akunjalo? Ngaba oku akwenzekanga kuni nonke izihlandlo ezimbalwa ngaphambili?
[Impendulo elula kuloo nto nguewe.]
Ndiyabulela kwakhona kwisiqwenga sesoftware! Ndicinga ukuba FANTASTIC!
Awungekhe uphile ngaphandle kwayo !!! Imveliso enkulu! Ayinakuthelekiswa nanto kwaye enkosi ngokuyiphuhlisa!
Ekugqibeleni ndiqinisekile ukuba umncedisi wakho mandikuhlawule. Ndinombulelo. ICopypaste ibilahlekile kakhulu okoko ndafumana i-Intel Mac eqhuba iLeopard. Ibaluleke kakhulu!
Ngokuqinisekileyo uyazi indlela yokubonisa intombazana ixesha elihle! [Sikholelwa ukuba wayebhekisa kwiPhepha lokuKhuphela]
Ndiyithandile inguqulelo yakudala ye-CP, kodwa kufuneka ndivume, ingxelo entsha ibhetele kakhulu. Andizange ndicinge ukuba ndingathi! Enkosi ngomsebenzi wakho onzima. Kuqala bendixhalabile malunga notshintsho olwenziwe kwi-CopyPaste. Ngoku ndonwabile ngale nto uyenzileyo kwaye andizukufuna ukubuyela umva!
CopyPaste Pro: nje ukuba uyizame, uyazibuza ukuba ungaphila njani ngaphandle kwayo!
UProfesa uGqr. Gabriel Dorado, i-Molecular Biology kunye ne-Bioinformatics
Umphathi weProjekthi / uMphathi weeNkqubo zeKhompyuter
IComputerPaste yakho kunye nohloboIt4Me zezona zicelo zimbini zisetyenzisiweyo kwikhompyuter yam kwaye basebenze kunye ngolonwabo iminyaka. Nceda wenze oku kwenzeke kwakhona, kungekudala. Ukuba uyakwenza oko, ndiza kuthiya umntwana wam olandelayo emva kwakho. Ewe kungathatha ixesha, kuba ndiza kuba namashumi asixhenxe ngomhla wam wokuzalwa ozayo ngo-Okthobha. : ^ D
Ikopi yokuNcamathisela i-TERRIFIC. Lulongezo olonwabisayo kwinkqubo yam yeMac. Zonke iinkalo zamkelekile kwaye zenze lula umsebenzi wam ngokungummangaliso. Qhubeleka nomsebenzi omhle. Ndiza kujonga ezintsha. WS
Enkosi ngolwazi lokuhlaziya. CopyPaste ibalulekile! JF eMaine
Enkosi ngokuthumela isiQinisekiso sePhepha. Yinkqubo ebanda kakhulu yesabelo ukusukela ngeMaelstrom kunye ne-EasyEnvelopes kwaye kufanelekile ukuba ubize. Ndikwi-faculty kwiYunivesithi yase-Oklahoma State kwaye ndisebenzisa i-CopyPaste ikakhulu xa ndidityaniswe kwifayile ephambili ye-OSU evela ekhaya. Kuyanceda kakhulu kwaye kugcina ixesha ukuze ukwazi ukukopa ukubhaliswa kweklasi yonke ngaxeshanye kunokutshintsha umva ujikeleze isikrini esinye ngexesha; inyani yokuba ndinokuphelisa zonke ii-cap apho abantu bekhompyuter babonakala bekhetha icing kwikhekhe.
Manene: Iminqwazi yam ikuwe. Into ebaluleke kakhulu iye yaphucuka, ngaphandle kwamathandabuzo ngayo. Ndiyikhuphele nje kwaye ndichithe imizuzu engamashumi amathathu yokugqibela ndijonga amanqaku ayo. Ndiyithanda kakhulu i-windoid edadayo entsha. Kwakhona, imibulelo emininzi ngesixhobo esikhulu. Ndikunqwenelela impumelelo enkulu, kwaye ngezixhobo ezinje, uya kuba nethamsanqa elikhulu. JS
Ndifuna ukukwazisa iComputerPaste yeyona nto igqithileyo eyenzekileyo okokoko iNkqubo 7.5. Ndicinga ukuba kuya kufuneka ucele iApple ukuba uyifake kwinkqubo elandelayo yokuphucula. Kwakhona, enkosi ngokuphucula okukhulu. Don
ENKOSI KAKHULU NGOKUHLAZIYA! Le yeyona nto ibalaseleyo endakha ndayisebenzisa! Qhubeleka nomsebenzi omhle. UJamie
Ndibe nethamsanqa lokukhuphela i-CopyPaste ulwandiso lwakho lwe-V 2.5.4 namhlanje ukusuka kwiCompuServe kwaye ndicinga ukuba lolona phumezo lubalaseleyo lwebhodi yebhodi eqhotyoshwayo endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye ulungile ukuba iApple kufuneka iyibandakanye njengenxalenye isoftware yenkqubo. JL
Ndiyifumene iluncedo. U-EL
NgoLwesihlanu ophelileyo ndithumele imali yam eyabelweyo kuwe yi-Special Delivery snailmail yale nkqubo ingasentla. Elinjani ixesha elonga msindisi! Ndonwabe kakhulu ndiyifumene kwaye ndayinika isiza. Kufanelekile yonke ipennyi nangaphezulu. RT
Ndifumanise ukuba i-CopyPaste ibonelela ngokoncedo lwayo nayiphi na ibhodi yezitshixo ezininzi. IJW
Ndifuna ukukwazisa ukuba bendidlala ngeenkqubo ezahlukeneyo ezifanayo nezakho kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba yeyakho yeyona ilungileyo ngokusetyenziswa kwaye, ngakumbi, amandla ayo okuhlala kunye nezinye iinkqubo. RL
Ndisandula ukuthumela imali eyi-20.00 ye-shareware (eyikheshi) ye "CopyPaste 2.5.4 (US)." CopyPaste yinkqubo entle! I-DS Arizona, e-USA
Esi sisiqwenga esingummangaliso sesoftware kwaye ndiyakuvuyela ukungenisa iifizi zam! Kule minyaka imbalwa idlulileyo ndizamile iinkqubo ezininzi 'zebhodi eqhotyoshwayo,' kodwa kude kube ngoku andizange ndikwazi ukufumana uzinzo olwaneleyo lokusebenza ngokufanelekileyo kwi-Mac yam. (Oku kubandakanya, ndiyakholelwa, iinguqulelo zangaphambili zeCopyPaste, ngokunjalo!) Ndisebenzisa iMacintosh LCII ekhawulezisiweyo yaya kwi-33MHz 040 ngesantya sokukhanya kweKhwezi. Ndine-8MB yenkunzi yegusha yangaphakathi, edityaniswe yaya kwi-32MB isebenzisa i-RAMDoubler kunye ne-freeware ye-RAMDoubler PUMP. Okwangoku ndinemifanekiso engama-61 ehamba kwiscreen sam xa siqala, kwaye ke unokucinga ukuba kwakubaluleke kangakanani kum ukufumana inkqubo ezinzileyo njengeCopyPaste 2.5.4 engayi kuphazamisa umatshini wam ngazo zonke ezo zandiso kunye neepaneli zolawulo. Oo, ndibambelela kwiNkqubo 7.1. Ndinayo i-CD-ROM, i-hard drive yangaphandle, iSyQuest esuswayo kwiDrive Hard, kunye nesikena esine-flatbed esixhonywe kwi-Mac yam. - AKUKHO kungqubana! NDONWABILE KAKHULU ngale mveliso, kwaye ungandicaphula, ukuba unqwenela! RT eToronto, Ontario, Canada
Ndingumfundi waseThai e-Australia. Kudala ndisebenzisa isoftware yakho kwaye ndiyayithanda. IComputerPaste yakho iluncedo kakhulu kwaye isebenza kakuhle ngaphandle kwengxaki kwaphela. KE eThailand
IkopiPaste ibe luncedo olukhulu kum kwiiveki ezimbalwa bendizisebenzisa. Ngokukodwa, 'iluncedo xa ndiyila iimpendulo kwizikhalazo zomthetho (Ndiligqwetha), elifuna ukuphindaphinda ukusetyenziswa kwezivakalisi okanye imihlathi eliqela. JF Maine, e-USA
Molo, ndingu 14 kwaye ndihlala e-NY. Ndikhuphele isoftware ethi "CopyPaste" kwaye ndiyifumana iluncedo kakhulu. Unyanisile… kwakutheni ukuze u-Apple angayicingi lento? RP, kwisiXeko saseNew York, NY, e-USA
Khuphela nje ikopi yePhepha. Andikawafundi amaxwebhu okwangoku, kodwa ngemizuzu embalwa yokulinga ndiyaqonda ukuba lolona lwandiso lubalaseleyo endikhe ndalibona kudala. Awunakulinda ukufika kwincwadi yokukhangela kwaye uthumele i $ 20. Ngesixa sabantu ababelana nabanye ababambayo kwaye abangasihlawuliyo, oko kungavakala kuyinto ehlekisayo- kodwa ndiyakuvuyela ukusebenza kwisoftware yakho. WJ Novi, MI USA
Inqaku elikhawulezayo lokukwazisa ukuba ndonwabile ngemveliso yakho. Nceda ujonge itsheki yam ekufuneka ifike kamva kule veki. JB
I-CopyPaste yakho yasekunene kufuneka ibe yinxalenye yesoftware yenkqubo esisiseko. DM Riverdale GA USA
CopyPaste ngokwenene yinkqubo eluncedo kakhulu! MC Encino, CA e-USA
Umhlobo wam kutshanje undinike ikopi yenkqubo yakho Sika, Khuphela, Cola. Ndiyayithanda! Kwezinye zokubhala kwam kufuneka ndisebenzise amabinzana aphindaphindwayo okanye amagama. Kuyakhawuleza kwaye kulula ukusebenzisa ii-clipboard ezininzi zeCopyPaste emva koko usebenzise irekhodi leemacros. Yenye yezo zimvo zikwenza uzibuze ukuba kutheni kungekho mntu ucinga ngayo kwangoko. Kufanele ukuba ibe sisixhobo esisemgangathweni kwikhompyuter nganye. Iyaxabisa i $ 20. Okufakwe kuyo uya kufumana itshekhi yam. BT Iselfowuni, AL USA
Kuyamangalisa! Ndijonge phambili ekufumaneni yonke le nkqubo! I-JM ephambili yeLargo, e-USA
Elona qhekeza * lesabelo endikhe ndadibana nalo. Ndikulungele nokuyihlawula !! Enkosi CC Concord, NH, e-USA
Enclose itsheki yam $ 20. Yinkqubo entle kakhulu. Inkqubo yakho yacetyiswa kakhulu kuMatshi kaMacToday ngemagazini yenyanga. Enkosi ngenkqubo eluncedo kakhulu. TW Tampa, eFlorida, eUnited States
Yeyona nto iluncedo kakhulu ekuboneni. Enkosi DM Grapeview, WA USA
Kudala ndisebenzisa iMac ukusukela ngo-1986. Kudala ndikhangela into eza kundinika ikopi eninzi kunye Cola amandla ukusuka kusuku lokuqala. Ndisebenzise yonke into eyabelweyo okanye imveliso yorhwebo ethe yafika kwaye ndazifumana ziyi-buggy (ziyangqubana nezinye zezigidi zolwandiso endinazo kwinkqubo yam) okanye kunzima ukuzisebenzisa (kufanele kube lula njengomyalelo-c okanye ayifanele iinzame). Khange ndikwazi ukuyifumana endiyithandayo kwaye ndingayisebenzisa de ndibone eyakho. Khange ndibenathemba lokuba iya kusebenza kuba yonke enye into ayiphumelelanga, kodwa ndonwabile nyani yiCopyPaste. Gcina umzamo olungileyo! UDK Brockport, NY e-USA
Enkosi sisiqwengana sesoftware! I-SF Newark, DE e-USA
Imveliso enkulu! I-SW Fountain Valley, CA e-USA
Oku kukude kwaye kude neyona shareware iluncedo ndiyithathile ixesha elide. Ndonwabile ngakumbi ukuxolela umrhumo we-shareware wale. Wenze umsebenzi omkhulu apha. RR Ridley Park, PA USA
I-CopyPaste-Eyona nto iluncedo kwi-Shareware eluncedo ka-96. La magama ayinyani ngokucacileyo. Esi sisixhobo esihle kwaye ndiyayonwabela. Qhubeleka nomsebenzi omhle!! IVR Vancouver, BC Canada
Ndiyikhuphele, ndiyizamile, ndiyayithanda, nantsi i $ 20. WL Canada
Ndiyonwabile ngenkqubo yakho. UAH Almonte, Ontario Canada
Kanye le nto bendiyikhangela iminyaka! I-GB Davis, eCalifornia eMelika
Ikopi yePhepha sisixhobo esimangalisayo, esisebenzayo, esincinci. Enkosi RB Winnipeg Canada
Ikopi yePhepha intle kakhulu andinakukholelwa. UTHANDA indlela elula ngayo. Merci! JR Camarillo, CA e-USA
Kuluyolo lwam ukubhalisa ikopi yePhepha. Okufakwe itsheki yam. Ndikhuphele imveliso yakho eyoyikisayo kwiZiffDavis Net / Mac ngeCompuServe. Andikwazi ukucinga ukuba ndiyonwabele njani iMac kule minyaka ilithoba idlulileyo inqamleze kwibhodi enye yokunamathisela. Ukubetha phakathi kwamacandelo oxwebhu olude okanye phakathi kwamaxwebhu amaninzi ukuhambisa izinto ezininzi kuye kwacaphukisa. Ikopi yePhepha sisixhobo sokwenyani semveliso. Kwakhona, ndiyavuyisana nawe kwaye ndiyabulela ngomsebenzi owenzileyo. GR
Sisiphi isipho endisifumene kule veki iphelileyo kumhlobo wam! Siyavuyisana nawe ngePhepha lakho lePhepha. Enkosi kakhulu ngokulungiselela le nto idumileyo. JC Quebec Canada
Khuphela / Cola, isiqwenga esihle sesoftware. I-LB Scottsdale AZ USA
Kundisindisa ixesha elininzi xa ndihlela ukhuphelo kulwazi lwam. GH Glendale, MS e-USA
Yeyiphi into epholileyo eluncedo! MM
Enkosi ngokwenza ubomi bam bube lula kakhulu. ($ 20 iposi) SH
Njengo-Atari ST wangaphambili ndinayo, kwi-ort yonyaka ukuze ndibenePowerMac, ndihlala ndikhalela inyani yokuba kukho ibhodi enye yokunamathisela. Angayenza njani iApple * ukuyenza loo nto? Ndibuzile! Ke enkosi ngePhepha. Oku kukwazisa ukuba namhlanje ndikuthumelele itshekhi yabahambi eyi- $ 20, evunyelwe kuwe (eseleyo kutyelelo lwam eGrand Canyon, Monument Valley, Yellowstone, njl., NgoSeptemba ophelileyo. Luhambo olunjani lona!) UDH Birmingham, eNgilani
Ndikhethe inkqubo yakho egqwesileyo ngolunye usuku, kwaye ngoku andinakuphila ngaphandle kwayo, ndiyasikwa namhlanje, ndiyathemba ukuba izakuphuma ngolwesiHlanu. KT
Ndithumele imali yam yobhaliso kuwe kwaye ndijonge phambili ekufumaneni igama-eliyintloko. Ndifumene i-CopyPaste v2.5.4 kwiMelika-ekwi-Intanethi. Yile nto bendiyifuna. Enkosi ngomsebenzi wakho onzima! I-LL Burlington, e-Iowa USA
Ndiyayithanda i-CopyPaste! CS San Francisco, California eMelika
Inkqubo eNkulu JB Monroe MI USA
Umsebenzi omhle! DB Hillsboro OKANYE USA
Ogqwesileyo !!!!!!!! AD Chicago, IL USA
“I-CopyPaste Pro ihleli nje ngasemva, ilindele ukusetyenziswa, ngokuthembekileyo ukuqokelela kunye nokugcina nantoni na oyikhupheleyo okanye osikileyo, ukulungele ukuncamathisela izinto naphina apho ufuna khona. Ngaphandle kwoluhlu olude lweempawu zamandla, iziseko zanele ukuba uqalise kwaye kulula ukuseta kunye nokusebenzisa.
Umntu othile obizwa ngokuba ngu-CopyPaste Pro Time Machine kwibhodi yakho yokunamathisela. Ngelixa ingakhangeleki njengeTime Machine, iyayigcina kwaye igcine phantse nantoni na onokuyikopa kwiMac yakho kwaye iyenze ifumaneke nangaliphi na ixesha kwixa elizayo.
-UJack D. Miller, uMac360 12/5/14 (ikhonkco)
Ukuphucuka kwesantya xa usenza uhlengahlengiso oluphindaphindiweyo ekufuneka ulwenzile kuyamangalisa. Esi sisixhobo samandla ngokuqinisekileyo somsebenzisi wamandla kwaye sifumana umlinganiso weGearhead we-5 kwaba-5. ” -Mark Gibbs, iNethiwekhiWorld 6/17/14 (ikhonkco)
Jonga enye yezixhobo zam endizithandayo zeMac. Ibizwa ngokuba yiCopyPaste Pro. Ngumphathi webhodi eqhotyoshwayo. Oko kuthetha ukuba nantoni na oyisikileyo okanye oyikhuphelayo iyagcinwa kwilayibrari ukuze iphinde incanyathiselwe kamva ngaphandle kokuyifumana kwaye uyikope kwakhona. Eli lixesha elikhulu lokugcina. -Tera Thomas O'Brien, TeraTalks, 5/16/14 (ikhonkco)
Xa kuziwa kwi-Mac yam, uninzi lokushumayela obuya kuliva lunento yokwenza nokugcina izinto kunye nezinto ezimbalwa eziluncedo zeMac; ezo zixhobo zincinci ezenza ngcono kunoko iApple yakhela ngaphakathi kwi-OS X. Nantsi enye yezona zilungileyo. Iya kukwenza usebenze ngakumbi, uchaneke, kwaye uvelise imveliso, eya kuthi ikwenze ube ngumntu olunge ngakumbi. Kopa uncamathisele. -UJack Miller, Mac360 1/8/14 (ikhonkco)
"Ukuba ubunokufumana isiXhobo esinye seMveliso kwiMac yakho uze ukhethe uKhuphelo lwePhepha Pro" -uJack Miller, Mac360 9/13/12 (ikhonkco)
“I-CopyPaste Pro yeyona nto iluncedo ongazange wazi ukuba uyayifuna. Iimpawu zayo ezibaluleke kakhulu ziyayiphucula imveliso yakho yemihla ngemihla. ” -Ben Harvell, iMacLife 6/17/11 (ikhonkco)
MaCity Ibhlog yase-Italiya 8/1/11 -I-CopyPaste Pro yeyona app yebhodi eqhotyoshwayo ye-Mac.
Uphengululo lweAppStorm 7/4/11 -UJames Cull 9 kwabali-10
IMacWorld 4 iimpuku ngoJuni 2003
Uphengululo lweMacUser UK nguCraig Grinnel 4/3/03
VERDICT: CopyPaste X ngokukhawuleza iba yinto engabalulekanga kwiimpuku ze4.5
Ingxelo yeHouston nguBob Levitus 2/13/03
I-MacUsers Shareware Utility Award kwi ikopiNamathisela
U-Mac Mac Magazine
Inqaku leMacWeek nge ikopiNamathisela
IMacintosh yokukhubazeka ngeShareware kunye neFreeware
Ukuhlaziywa kweTidbits ikopiNamathisela
I-Shareware Junkies ivote ikopiNamathisela Eyona nkqubo yeMacintosh yoNyaka
Imveliso yeNethiwekhi yeMacintosh yeMveliso yoSuku
Eyona Ntengiso kwiMacDirectory
Uphengululo lweJenali yeMacNet
Kum, usuku ngaphandle kokukhutshelwa kwesabelo seMac lusuku ngaphandle kwelanga. Yiyo loo nto ezi drive zam zimbini zixinene ngezinto ezilusizi ezishiyiweyo.
Ndikhe ndabathanda. Ndenze njalo. Ngosuku. Kwiveki. Okanye iiyure ezimbalwa. Kwaye, ke, ndilibele nje ngezinto ezincinci ezinelishwa. Ixesha elininzi, zininzi iinkqubo ezintsha. Lihlabathi elinzima. Inyani yile, uninzi lwabo aluzange luyenze into ebendiyifuna ukuba bayenze - ukukhawulezisa imisebenzi yemihla ngemihla kunye nokuphindaphinda okuphazamisayo kwikhompyuter.
Ekuphela kwento endiye ndahlala ndiyinyani kuyo yinto ethandekayo * eKopisha ukusuka kubantu abamangalisayo kwiSoftware yeScript (ngoku eyiPlum emangalisayo). * I-CopyPaste lulwandiso oluthi xa ukhutshiwe, lubonelele ngebhodi eqhotyoshwayo ezili-100 onokuncamathisela amaqhosha abalulekileyo kunye namaxwebhu, ii-URL ozifunayo nangayo nayiphi na into ofuna ukuyigcina uphinde uyisebenzise kwakhona. Kumhleli osebenza kwi-Mac yinto encinci yezulu nge- $ 21 yaseMelika.
Kodwa musa ukulithatha ilizwi lam. Njengayo yonke i-shareware ungayikhuphela, uyizame kwaye ukuba uyayicaphukela, ke mayiyeke ithambe ndaweni ithile kwikona yehard drive yakho, kude kube ngaphezulu kokucoca, ucoca yonke into ngaphandle (njengakuze kwenzeke.)
UPeter Wilson, iLanga laseVancouver
"Ndiyayiqalekisa iApple ngokungandivumeli ndikope ngaphezulu kwento enye ngexesha." Kodwa indumiso mayibe yinkqubo yesisa. KwiShareware.com, ndiye ndafumanisa isicelo esandisa ukukopa kwam okuphindwe kalishumi. Izixhobo zokukhuphela isicatshulwa seCopyPaste kukuvumela ukuba uguqule imeko, ithebhu, okanye ufake iifayile zombhalo, imifanekiso, kunye nezandi kwibhodi eqhotyoshwayo-iphalethi edadayo igcina umkhondo wento apho. Nokuba ucoceko lwekliphu lucocekile, oluthi luphose izinto ezikhutshelweyo kwifolda kwi-desktop yakho - ezilungele abaphandi bakwi-intanethi.
"Uyakufumanisa ukuba i-CopyPaste incinci ngokumangalisayo kwaye, njengoninzi lwezinto endizithandayo ze-shareware, inezinto ezineentloni-ungayithumela kwaye iya kubuya ngobulumko kwi-beck yakho kunye nokufowuna." - Kaninzi…
“Kwabo benza naluphi na uhlobo lokubhala, iCopyPaste-X sisixhobo esibaluleke kakhulu ekulula ukusifunda, kwaye xa uqala ukusisebenzisa, uya kuzibuza ukuba uhleli njani ngaphandle kwaso. I-4.5 kwezi-5 iimpuku ”- nangaphezulu…
"Ikopi yePhepha: I-Godsend yaBasebenzisi baMandla kunye neeNdawo ngokufanayo"
UNancy Carroll Gravley, Umqwalaseli weMac
UPeter Wilson, Inqaku leVancouver Sun
“I-voulez ye-voulez ye-totalement is vos presse-papiers (les sauvegarder, les éditer, les organizer par thme), CopyPaste is fait pour vous. De même, si vous voulez être uncedo de la saisie, sa fonctionnalité yType peut vous aider. It is vens la densité de possibilités, les 30 $ demandés ne semblent pas exagérés.
UAngel Heureux, IMacGeneration
"I-CopyPaste Pro ngumzekelo wesicelo esiguquguqukayo kuba, ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zemveliso, inezinto ezininzi ezisetyenziswayo. Abaphuhlisi baphucule ekusebenzeni kwekhompyuter esisiseko kwaye iziphumo ziyingqondi.
Umphuhlisi weCopyPaste Pro, iPlum Amazing, kubonakala ngathi uyayibonisa kwezinye iinkqubo zayo - ukuthatha iinkqubo ezilula kunye nokuzipompa zizele zii-oomph kunye neempawu ezongezelelweyo.
I-CopyPaste Pro indincede ndonga ixesha kwaye kuyonwabisa ukusebenzisa-okulula kunye nobutyebi. Abanye abantu banokucinga, nangona kunjalo, ukuba ixabiso lentengiso leedola ezingama-30 kule nkqubo lincinci kakhulu ukuba lingachithwa kwizinto ezilula kodwa uya kufumanisa ukuba wakube uyifumene, uyakuzibuza ukuba wakwenza njani ngaphandle kwayo. ”
Akukho mini idlulayo apho ndingayisebenzisiyo ikopi Cola. Enkosi kwakhona ngesixhobo esincomekayo. ” - URobert Towers
Ukuqhuma kweJamani ngo-10/27/14
NdiyisebenzisaLe 16 Nov 2010
I-CopyPaste Pro -yeyona nto isebenzayo
nguMarcel Dufresne, Meyi 28, 2020
IMacGeek Podcast Septemba 2nd 2019
Nge-22 ka-Epreli 2019 -Ukuphononongwa kweTekhnoloji yanamhlanje nguKerry Dawson
Inqaku elinentambo ukusuka ngo-1997 malunga neCopyPaste
Qhagamshela kwiCopyPaste kulondolozo lwembali yeMacintosh.
Ithala leencwadi le-ZDNet ukusuka ngo-1998
Ikopi yokuGqibela ukuphumelela imbasa evela eMacUser